म्याग्दीका बन्दको प्रभाव सुन्य | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार म्याग्दीका बन्दको प्रभाव सुन्य
म्याग्दीका बन्दको प्रभाव सुन्य
२०७३, २७ फाल्गुन शुक्रबार ११:३४
The district headquarters of Myagdi district, Beni bazaar at the confluence of Kali Gandaki river and Myagdi river looks tempting to travel to, on Monday, November 21, 2016. Lately, the bazaar has been in the list of tourist’s choice to stop by. Photo: RSS
म्याग्दीमा शुक्रबारको बन्दको प्रभाव परेन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव सुन्य रहेको छ । मोर्चामा आवद्ध रहेको संघिय समाजवादी फोरम म्याग्दीका भएपनि बन्दकर्ता नै नभेटिएपछि बन्दको प्रभाव परेको छैन् । बेनीबजारका पसल, कलकारखाना, विद्यालय, बैक तथा वित्तिय संस्था खुलेका छन् । सदरमुकाम बेनीबाट बाहिर जाने यातायातको साधनमा कमी भएपछि आन्तरिक रुटका सवारीसाधन निर्वाध चलिरहेका छन् ।
विहानै देखी बर्षा भएका कारण बजारमा चहलपहल छैन् । केही पसल बन्द भएपनि बन्दको कारण नभएको प्रहरी नायव उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले बेनीअनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । संघिय समाजवादी फोरम म्याग्दीको अध्यक्ष मुक्ति रोका विगतमा पनि पार्टीले गरेको बन्दको विरोध थिए । पार्टीको अस्तित्व भएपनि जिल्लामा सक्रिय नभएकाले पनि बन्दको प्रभाव नपरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । बेनी तथा आसपासको चोकचोमा प्रहरीहरू परिचालन भने गरिएको छ । बन्दमा कुनै घटना हुनसक्ने भन्दै प्रहर्ीले अन्य दिनको तुलनामा निगरानी बढाएको छ ।
Previous articleम्याग्दी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा रेग्मी नियुक्त
Next articleबिमबासीले भने,‘सरकारी सेवासुविधामा ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्यो’